नेपाल आज | माओवादीमा लाग्नासाथ दुर्गा प्रसाईलाई कहाँवाट प्राप्त भयो अरवौंको सम्पत्ति ?
माओवादीमा लाग्नासाथ दुर्गा प्रसाईलाई कहाँवाट प्राप्त भयो अरवौंको सम्पत्ति ?
आइतबार, १३ असार २०७८ गते प्रकाशित - नेपाल आज
माओवादीमा लागेको आरोपमा ६ महिना शैनिक हिरासतमा रहेका झापाको विर्तामोडका दुर्गा प्रसाई त्यसपछि एकाएक ब्यवसायमा उदाए । ६० को दशकमा सुरुवात देखि नै सुरु भएको उनको चर्चा अझै सेलाएको छैन ।
कहिले विएण्डसी हस्पिटलको कारण त कहिले तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली र पुस्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मार्सी चामलको भात खुवाएको कारणले उनको चर्चा हुँदै आएको छ ।
५० को दशकसम्म भैसी पालन, स्टिलको दराज कारखानालगायतका सामान्य ब्यवसाय गर्दै आएका प्रसाई ०५६ मा अचानक भुमिगत माओवादीको सम्पर्कमा पुगे । ०५७/०५८ सालदेखि माओवादीमा उनको निकै राम्रो सम्वन्ध स्थापित भयो ।
यसै क्रममा ०६० साल माघ १० गते उनलाई सेनाले पक्राउ गर्यो । २२ दिनसम्म शैनिक हिरासतमा थिल्थिलो हुनजेल कुटाई खाएका उनले ६ महिना हिरासतमा विताए । त्यस वेला शैनिक हिरासतमा परेको मान्छे या त अव माओवादीमा लाग्दिन भनेर कागज गरेर वाहिर आउँथे या त ठुलै दवावले मात्रै छुट्ने गरेको सर्वविदित छ । तर, प्रसाई तत्कालिन सेनाका कर्णेल ध्रुवकुमार साहसँग सेटिङ्ग मिलाएर वाहिर आए । तर उनी सेटिङ्गको कुरालाई अस्विकार गर्छन । ‘सन्जोग पनि हो, कर्म पनि लिएर आएको थिए’ उनी भन्छन्–‘त्यसले गर्दा त्यतिखेर म छुटेँ।’
त्यसपछि उनी एकाएक मेडिकल ब्यवसायमा उदाय । झापामा विएण्डसी टिचिङ्ग हस्पिटल सञ्चालन गर्ने कुरा देखि नै उनको चर्चा चुलियो । किनकी प्रसाईकै भनाईमा पनि रातारात खरवौंको लगानी गरेर हस्पिटल सञ्चालन गर्ने उनको हैसियत थिएन ।
विर्तामोड चौकमा ५ विगाह, र अस्पताल सञ्चालन भएको ठाउँमा १६ विगाह गरी कुल २१ विगाह जग्गाको मालिक रहेका उनले एकाएक खरवौंको अस्पताल सञ्चालनको कुरा आस्चर्यकै विषय थियो । तर, उनले अस्पताल सञ्चालन गरेर देखाए ।
यहि प्रकरणपछि उनलाई प्रचण्डको सम्पत्तिमा रजगज गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनको ब्यवसाय सवै प्रचण्डको लगानीमा सञ्चालन भएको र त्यसको ब्यवस्थापन मात्रै दुर्गा प्रसाईले गरिरहेको चर्चा उतिवेला देखि नै सुरु भएको हो। यी आरोपमा अहिलेसम्म प्रचण्डले मुख खोलेका छैनन् ।
तर, प्रसाई भने ति आरोपहरु निराधार भएको वताउँछन् । इमेज टेलीभिजनको ‘हट सिट’ कार्यक्रममा अन्तर्वाता दिदै उनले भनेका छन्–‘म दुर्गा मान्ने मान्छे। यदि प्रचण्डको एक रुपैयाँ मात्रै रछ भने नेपाल सरकारलाई वुझाउन तयार छु । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा गएर वुझदा हुन्छ, शेयर कस्को नाममा छ भनेर।’
आफुले जग्गा धितो राखेर वैंकवा ऋण लिएको र त्यहि पैसाले अस्पताल सञ्चालन गरेको उनको दावी छ । ‘दुर्गा प्रसाई एकाएक अरवपति कसरी भयो ? यस्तो पनि हुन्छ र ?’ भन्ने प्रस्तोताको जिज्ञासामा उनले भनेका छन्–‘अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एकाएक राष्ट्रपति भए, वाराक ओवामा पनि एकाएक राष्ट्रपति भए। उनीहरु वच्चामा राष्ट्रपति थिएनन् । मेहनत गर्दै गएपछि हुने हो । मेरो पनि २८÷३० वर्षको लगानीले म यो ठाउँमा आएको हो । वैंकले पत्यायो। मैले एक करोड रुपैयाँ निकाले भने वैंकले मलाई सय करोड रुपैयाँ लोन दिन्छ । वैंकवाट लोन लिएर मैले काम गरे ।’
‘स्टिलका दराज अलिअलि वेचेर, भैसी पालेर मात्रै अरवपति वन्ने आधार तयार हुन्छ र तपाईको÷वाउवाजेको पृष्ठभुमि नै अरवौपति हुने खालको त होईन ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले विर्तामोडको जग्गा वैंकमा राखेर ३ सय करोड तथा वजारको दुई अर्व आफुमाथि ऋण रहेको दावी गरे ।
विएण्डसी टिचिङ्ग हस्पिटलनको नाममा सात वटा वैंक ऋण रहेको वताएका उनले वैंकको नाम भने खुलाउन चाहेनन् ।
‘सुरुमा मलाई पनि वैंकले पत्याएन। १५ करोड मात्र दियो। तर, मैले वजारमा वाँकी उठाएर ६०÷७० करोडको काम गरे’ उनले थप स्पष्टिकरण दिदै भनेका छन्–‘त्यसपछि सवै जना लागे। वैंकले पनि पत्यायो ।’
तपाईको २१ विगहा जग्गा धितो राखेर यत्रो पैसा आउँछ त? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्–‘यो विषय मेरो सिएलाई सोध्नुसन। मेरा दुई जना सिए, दुई जना लिगल एडभाईजर छन् । महिनाको ४ करोड रुपैयाँ तलव खुवाउँछु । सालको १३ देखि १४ करोड ट्याक्स वुझाउँछु राज्यलाई ।’
तर, तेत्रो ऋणको श्रोत चै जग्गा नै भएको वताएका उनले थपे–‘म १६/१७ वर्षको उमेरदेखि काममा लागेको हुँ । त्यसै वसेको होईन । ति आम्दानी पनि थपियो नी।’ उनले जति नै कुरा घुमाए पनि रातारात अरवपति वन्ने आधार भने प्रष्ट्याउन सकेनन् ।
प्रसाईले आफनो सोच नै ठुलो भएकाले निरन्तर प्रगति गर्दै गएको वताए । ‘अवको १० वर्षमा वैंकले मलाई १० हजार करोड ऋण दिनुपर्छ। मैले मेचीमा ५० हजार मान्छेलाई रोजगारी दिनु पर्छ । मैले सालको १ अरव रुपैयाँ ट्याक्स वुझाउनु पर्छ । मैले वुझाएको ट्याक्सवाट वनेको वाटोमा मेचीका जनता हिड्नु पर्छ भन्ने हो ।’
मास्टर कुटेपछि ८ कक्षामै रेस्टिकेट
रातारात अरवपति वन्ने उनको आर्थिक हैसियत जस्तै शैक्षिक योग्यता पनि छ। उनले आठ कक्षासम्म पढेका छन् । ‘म अलिकति स्कुलमा पनि उदण्डै टाईपको मान्छे हुँ, मेरो सरसँग त्यतिखेर कुरा मिलेन’ उनी भन्छन्–‘सरसँग यसो अलिकति उ भो, मलाई रेस्टिकेट गर्नु भो। मैले छोडदिए।’
मास्टरै कुटनुभो की के हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले ‘त्यस्तै त्यस्तै’ भएको वताए । ‘त्यस्तै–त्यस्तै भो भनौ न अव। मास्टरै कुट्ने भनेर किन भन्नु अव अहिले यहाँ। त्यस्तै त्यस्तै भो। त्यहाँवाट मैले पढाई नै छोडे’ उनले थपे–‘तर, स्कुलवाट रेस्टिकेट भएपनि हरेक कामवाट म रेस्टिकेट कहिलै भईन। मैले मेरा कामहरुलाई निरन्तर दिएको छु । आज मैले १ सय ४ जना डाक्टरसिहत ८ सज जनालाई रोजगारी दिएको छु ।’
अहिले पनि झापामा डिजाईनर फर्निचर भनेर स्टिलको दराजको कारखान चलिरहेको वताएका उनले भने–‘मैले भैसी दुएर आएको हुँ। मैले घाँस काटेको छ, हलो जोतेको छु । सवै दुःखसुख भोगेको छ। अहिले त्यो कुरा भन्यो भने पत्याउँदैनन्। त्यतिखेर मैले मेडिकल कलेज वनाउँछु भन्दा पनि पत्याउँदैन थिए ।’
दुर्गा प्रसाईको लगानीमा प्रचण्डपुत्री गंगा र रेणुको घर
दुर्गा प्रसाई केपी शर्मा ओली पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विएण्डसी टिचिङ्ग हस्पिटल